Child – Page5– Healthy Life Journal
သင့်ကလေး လက်မစုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ပျောက်စေဖို့ …
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လက်မစုပ်တာက ကလေးတွေလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါ။ သူတို့အနေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာနေလိုတဲ့အတွက် လက်မစုပ်ရတာဖြစ်ပြီး ဒီအကျင့်က စိတ်သက်သာရစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်မစုပ်တဲ့အတွက် ကလေးငယ် ကူးစက်ပိုးဝင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိသလို မူကြိုတက်တဲ့အရွယ်အထိ အကျင့်ပါသွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရပါသေးတယ်။ (၁) ကလေးလက်မစုပ်တာကို လူရှေ့မှာ...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွားပိုးစားတာကို လူတွေက သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး။ သွားနာလာတဲ့အချိန်ကျမှ သွားဆရာဝန်ဆီ ပြသရမှန်းသိကြတယ်။ အဲဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ သွားက ထိခိုက်နေတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် သွားပိုးစားရသလဲ . . . သွားပိုးစားတာက သွားကိုစနစ်မှန် မတိုက်တာကြောင့်၊ အချိုများတဲ့...
ဘယ်သူတွေက ကလေးတွေအပေါ် မတရားပြုကျင့်လိုစိတ်ရှိနေသလဲ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မိဘတိုင်းက ကိုယ့်ကလေးကို မတရားပြုကျင့်မှုမခံရအောင် ကာကွယ်လိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ထည့်ထားဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဘယ်သူတွေက ကလေးတွေအပေါ် မတရားပြုကျင့်လိုစိတ်ရှိနေသလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ ကလေးကို သင်ပြပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ (၁) ဘယ်သူမဆို...
အိပ်ရာထဲ ဆီးမသွားတော့တဲ့ကလေး ဆီးသွားတာကို တွေ့တဲ့အခါ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အိပ်ရာထဲဆီးသွားတာက ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဆီကို ဆီးအိတ်ပြည့်တဲ့အခါ အိပ်ရာကထဖို့ နှိုးဆော်တဲ့ သင်္ကေတမရောက်ရှိလို့ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါက ကလေးရဲ့အပြစ် မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေအရ ကလေးတွေကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာ၊ ဝမ်းနည်းအောင် အော်ဟစ်ရိုက်နှက်တာ စတဲ့အပြုအမူတွေ လုပ်တဲ့အခါ ညဘက်မှာ...
ရေကူးခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး (၁၀)
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နွေရာသီမှာ လူကြီးတွေသာမက ကလေးတွေလည်း ရေကူးသင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေ စနစ်တကျ ရေကူးတတ်အောင် ရေကူးသင်တန်းပို့ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ရေကူးတာကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေက အများကြီးပါ။ ရေကူးတာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရိုးတည်ဆောက်ပုံစနစ်ပေါ်မှာ ဒဏ်သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို...
ကလေးအမြင်အာရုံအတွက် စိတ်ပူနေလျှင် အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး ကစားခုန်စားလှုပ်ရှားခိုင်းပါ
၊ ကိုထက် ၊ ကလေးအမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေဖို့ အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ကစားခုန်စားပြုလုပ်တာကို တစ်နေ့ အချိန် နှစ်နာရီခန့် ပေးသင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မိဘတွေကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကလေးတွေကစမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တက်ဘလက်နဲ့ ဂိမ်းကစားတာ၊ တီဗီကြည့်တာစတာတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေကြတဲ့အတွက် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြဿနာအမျိုးမျိုး...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ကျန်းမာရေး (၃)
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကြွက်တက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အိပ်မပျော်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အိပ်မပျော်ဘူးဆိုပြီး အိပ်ဆေးတွေ သွားမသောက်ရပါဘူး။ အိပ်ဆေးက စွဲတတ်ပါတယ်။ ကလေးကို ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ အိပ်ခါနီးရင် သိပ်မတွေးနဲ့၊ ဟိုစဉ်းစား ....
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ Pulled Albow Syndrome ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ ။ ဒီရောဂါ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ တချို့လူကြီးတွေက ကလေးငယ်လေးတွေကို စိတ်မရှည်ဘဲ လက်ကောက်ဝတ်ကနေ ဆတ်ခနဲ မတင်ပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ...
မွေးကင်းစမှ ခြောက်လအထိ ကလေးငယ် အာဟာရပြည့်ဝစေရန်
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ကလေးတွေရဲ့ အာဟာရရရှိတဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အသက်တစ်နှစ်အရွယ်မှာ အာဟာရ ပြည့်ဝစွာရရှိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတာဟာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အတိုးတက်ဆုံး အချိန်ဖြစ်လို့ပါ။ ကလေးတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်ရှိသင့်သည့်...
Healthy Life Journal အခုအခါမှာ ဝက်သက်ရောဂါက ကလေးတွေ သာမက လူကြီးတွေမှာပါ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ၅-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဝက်သက်ရောဂါအကြောင်း သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ ♦ ဘာကြောင့် ဝက်သက်ရောဂါ...